राजेस पायल राई र अञ्जु पन्त द्धारा स्वर बद्द प्रसतुत गीत "काले बाबु"ले राख्न को लागी सुझाव दिनु भएको हो ! नेपाली चलचित्र सिलसिला को लागि उक्त संगीत गाइएको हो ! उहाँ उक्त गीत काली लाई समर्पण गर्नु भएको छु !
तपाई हरु पनि गीत संगीत आफ्नो साथीलाई समर्पण गर्न चाहनु हुन्छ भने सपनासंसार लाई सम्पर्क गर्नुहोला !
अडियो-भिडियो साथीको अनुरोध
Labels: अडियो-भिडियो साथीको अनुरोध